3 talaabooyin fudud si ay u gudbiyaan Music ka iPad in Lugood
> Resource > iPad > Music Transfer ka iPad in Lugood in 3 Talaabada Simple
"My music xayiran on my iPad iyo waxa ay u muuqataa Lugood diidaan inay ku caawiyaan ii nuqul in Lugood Library aan on my computer. Waxaa iga kaxeeya waalan. Cidna ma ogaan sidee ayaan music ka iPad wareejiyo Lugood?"
Tani waa su'aal dhibaya dad badan. Haddii aad si joogto ah u heli songs si toos ah aad iPad, ama aad music lumay ee aad Lugood Library, waa inaad raacdaa tallaabooyinka hoose si ay uga jawaabaan su'aasha ah "sida loo ka iPad wareejiyo music in Lugood Library".
Your iPad iyo cable USB ay;
Download Software ah si ay u gudbiyaan Music ka iPad in Lugood
Wondershare TunesGo - ka iPad Copy Music inay Lugood Library kaaftoomi si xor ah
Transfer songs iibsaday ka iPad in Lugood,
Copy heesaha oo dhan iyo playlists ka iPad in Lugood,
Doorbiday heeso ka iPad dhaqaaq Lugood,
Taageerada iPad Air, iPad mini, iPad cusub, oo ka sii >>
Talaabooyin lagu Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPad in Lugood
Fur Lugood on your computer. Raadi iyo riix aad rabtid in doorasho Lugood. On Windows PC, waa in ay Edit menu. On Mac, waa in Lugood menu taas oo ah xaq ag icon Apple oo ku saabsan bidix ee sare. Daaqadda dabamariyay kor, hubi hortag iPod, iPhone, iPad iyo ka syncing si toos ah . Haddii aad gab syncing si toos ah, aad ku guul dareysato doonaa si ka iPad wareejiyo music in Lugood.
Tallaabada 2. Ku rakib TunesGo Wondershare on your computer
Haddii aad u baahan tahay inaad ka iPad wareejiyo music in Lugood Library on PC Windows ah, rakibi Wondershare TunesGo (Windows). Si music ka iPad wareejiyo Lugood on Mac, rakibi Wondershare TunesGo (Mac) . Ka dib markii aad u soo dajiyo, waxaa isla markiiba abuurtaan. Ka dibna aad isticmaasho iPad USB cable in ay ku xidhmaan aad iPad la your computer. Marka xiran si guul ah, aad arki doonaa suuqa kala u eg shaashadda ku yaal dhinaca midig.
Tallaabada 3. dhaqaaq Music ka iPad in Lugood
Isku day mid ka mid ah sida soo socota in aad nuqulka music ka iPad in itune:
# 1. On uu furmo suuqa ugu weyn, waxaad ka arki kartaa ikhtiyaarka Si Lugood . Waxaa Click, heesaha oo dhan aad iPad waxaa loo wareejin doonaa Lugood Library. Ha welwelin ku saabsan guud ahaan tus. Wondershare TunesGo dhigaysaan iyo heeso kulanka u dhexeeya aad iPad iyo Lugood Library, shaandhaynta baxay songs nuqul.
# 2. Riix Media dhinaca bidix ee suuqa. Markaas aad keentay in uu furmo Music ah. Laga soo bilaabo halkan, waxaad riixi kartaa Smart dhoofinta in Lugood in ay dajiyaan music ka iPad in Lugood aad. Ama dooro songs doonayay oo guji saddexagalka xaq hoos ku dhoofinta in . In liiska hoos-hoos u, dooran dhoofinta in Lugood Library .
Video Tutorial Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPad in Lugood Library
3 Siyaabaha kaabta iPad on Mac
2 Solutions in takhalusid nuqul Photos on iPad
4 Siyaabaha Bedelka Photos ka iPad in Flash Hard Drive